Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi Iley – Shacabka Somaaliyeed ee Ogadenya iyagaa bilaabey dagaalka oo Tigreega ka gardarnaa
Posted by ONA Admin	/ May 9, 2013
Waxaa laga soo daayay ESAT cajalad cusub oo muujinaya hadafka ay Wayaanaha ugu talagaleen Cabdi iley. Tv-ga ESAT ee ka soo baxa Amsterdam ayaa laga daawaday Cabdi Iley oo si aanu ku talagalin ku fashiliyay siyaasadda Tigreega ee ah inay shacabka S. Ogaadenya ku khaldaan inay diyaar u ahaayeen in Itoobiya ay wada maamulaan oy u baahanyaanyeen garabka S.Ogadenya maadaama siduu u dhigay hadalka ay ka cabsi qabaan axmaaradu inay xukunka qabsadaan balse uu Ogaadeenkii ku kani adaygay oo uu xabad ka waraabiyay. Ujeedada Wayaanaha ee Cabdi iley uu ka dhaadhicinayo dadka uu la hadlayo ayaa ah in dambiga laga galay shacabka Ogadenya dusha laga saaro iyaga oo laga soo qaado dad aan caqli lahayn oo garan waayay wanaagii uu Tigreega la doonay.
Xogahan waxaa soo gaadhsiiyay caalamka oo wadankii kala soo baxay mudane Cabdulaahi oo sida ay ESAT shegtay markii hore uu Cabdi ilay ku khalday hadalo been ah balse markii uu ogaaday xaqiiqda jirta bilaabay inuu uruuriyo xogo badan. Wuxuu Cabdulahi Xuseen diyaarinayaa hadda oo goor aan fogayn la soo dayn doonaa documentry film heer caalami ah.
Wuxuu nala wadaagay hadda xogahan iyo kuwo kale oo aan maalmaha xiga soo dayn doono. Waraysiga iyo hadalada uu ku hadaaqayo Cabdi iley halkan kala socda.
F.G. Waxaan soo dayn doonaa goor dhow filim uu Cabdi iley kaga xogwaramayo sidaan idiinku sheegnay maqaalada aan ka qornay xidhiidhkii ka dhexeeyay Axmad nashaad iyo Itobiya ka hor intii aanay xaroonin.